Hadda waxaad ku dejin kartaa asal caadiyan Safari | Wararka IPhone
Alex Vicente | 26/09/2021 13:00 | macruufka 15, Casharrada iyo buugaagta, dhowr
Iyada oo iPhone 13 uu gaarayo isticmaaleyaasheedii ugu horreeyay iyo IOS 15 oo leh toddobaad toddobaad nololeed, mid ka mid ah isbeddellada ugu yaabka badan ee aan yeelan doonno markaan isticmaaleyno qalabkeenna sannadkan ayaa ah wadarta dib -u -qaabaynta in Safari, biraawsarka Apple, uu ku dhacay barnaamijkiisa. Browser -ka waxaa loogu talagalay inuu noo fududeeyo socodka iyo awoodaan inay abaabulaan dhammaan tabyadayada furan hab ka sahlan. Laakiin taasi kaliya maahan, sidoo kale waxay noo oggolaanaysaa inaan si badan u habaynno annagoo ku darnay asalka asalka ah ee iPhone -ka. Waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo.
Dejinta asalka u gaarka ah iPhone -ka ee barnaamijka Safari waa mid aad u fudud oo waad isticmaali kartaa sawirradaada ama waxaad dejin kartaa darbiyada cusub ee Apple ay ku dartay macruufka 15.
Sida loo dejiyo asalka caadada ah ee Safari leh macruufka 15
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa fur tab Safari oo madhan. Tani waa inaad riix labada barxadood taasi waxay ku taal baarka ku yaal dhinaca midigta hoose iyo ka dibna riix badhanka "+" kaas oo ka soo muuqan doona isla baarka bidixda ku xiga dhammaan tabyada aad furtay ee shaashadda lagu qaybiyey.
Marka xigta, waa inaad hoos u dhaadhac tabka laguu furay ilaa aad ka hesho badhanka tafatirka.
Sidan ayaad ku geli doontaa dhammaan xulashooyinka habaynta ee Safari leeyahay. Dhexdooda, waxaad ka heli doontaa isbeddel Sawirka hore, in aad dhaqaajiso si aad u awooddo inaad dooratid asalka aad ugu jeceshahay.
Gujinaya badhanka + Waxaad geli kartaa mid kasta oo ka mid ah sawirrada galalkaaga.
Markaad dooratid sanduuqa aad dooratay, tan waxaa lagu muujin doonaa gadaasha bogag aan lahayn mid, tusaale ahaan, markaad furto tab cusub Safari, waxaad ka heli doontaa sawirka la soo xulay oo leh ikhtiyaarrada caadiga ah ee biraawsarku soo bandhigo.
Shakhsi ahaan, waxaan u maleynayaa in lahaanshaha kartida habayntaani ay wanaagsan tahay, hase yeeshe, Uma maleynayo inay yeelan doonto saameyn aad u weyn maadaama inta badan bogagga aan booqanno aynaan arki doonin asalkayaga. Sidoo kale, yaa aan hore u baran cod cad oo aan buuq lahayn marka uu soo galayo biraawsarka? Noo sheeg waxa aad ka qabto ikhtiyaarkan habaynta!
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Waxaad hadda ku samayn kartaa safari caadadii hore